Xubuntu 18.04 LTS Ntuziaka Ntuziaka | Site na Linux
Xubuntu 18.04 LTS Ntuziaka Ntuziaka
Ya na mwepụta nke Ubuntu 18.04 LTS, ya ọzọ flavors mere otu aga ẹkedori anụ nsụgharị nke ndị a. N'okwu a Mu bya ezia unu iphe-ọma kẹ Nchileke nke Xubuntu 18.04 LTS.
Ejiri mara Xubuntu bụrụ uto nke Ubuntu nke anaghị achọ ka ọtụtụ usoro ihe onwunweYa mere, a na-atụle ya dị ka nkesa ọkụ, na mgbakwunye na nkesa a ka na-akwado nkwado maka sistemụ 32-bit n'adịghị ka Ubuntu.
Tupu ibudata ya, ọ dị mkpa ịmara ihe ndị otu anyị chọrọ iji nwee ike ịgbapụ Xubuntu 18.04 LTS.
1 Ihe ndi choro iji bulie Xubuntu 18.04 LTS
2 Etu esi etinye Xubuntu 18.04 LTS
3 Usoro ntinye nke Xubuntu 18.04 LTS
Ihe ndi choro iji bulie Xubuntu 18.04 LTS
Iji na-agba ọsọ usoro ma jiri ihe ndị dị mkpa na nke a anyị chọrọ ọ dịkarịa ala na otu anyị:
Nhazi na nkwado PAE
8 GB nke ohere diski efu
Ihe eserese eserese 800 × 600 kacha nta
DVD mbanye ma ọ bụ USB n'ọdụ ụgbọ mmiri
Akwadoro chọrọ inwe ahụmịhe na-enweghị mmachi na sistemụ bụ:
1 RAM n'ihu
20 GB nke ohere diski efu
Kaadị eserese na-akwado opekata mpe 1024 × 1280
Etu esi etinye Xubuntu 18.04 LTS
Anyị ga-aga n'ihu ibudata na iso saịtị saịtị nke usoro, Ana m akwado nbudata ahụ site na njikọ Torrent ma ọ bụ Igwe Ọdụdọ.
Ozugbo nbudata nbudata a mere, ị nwere ike gbaa iso iso DVD ma ọ bụ ụfọdụ USB ọkụ. Usoro ime ya na DVD:
Windows: Anyị nwere ike idekọ iso na Imgburn, UltraISO, Nero ma ọ bụ mmemme ọ bụla ọbụlagodi na enweghị ha na Windows ma mesịa nye anyị nhọrọ iji pịa akanye akanye.
Linux: Ha nwere ike iji nke na-abịa na gburugburu eserese, ha gụnyere, Brasero, k3b, na Xfburn.
Windows: Ha nwere ike iji Ngwunye USB zuru ụwa ọnụ ma ọ bụ Linux Live USB Creator, ha abụọ dị mfe iji.
Linux: Nhọrọ a tụrụ aro bụ iji iwu dd, ọ dị mkpa ka ị nyochaa nke mbanye USB ka akwado iji dekọọ data na ya:
Usoro ntinye nke Xubuntu 18.04 LTS
Mgbe anyị kwadebere usoro ntinye anyị, anyị na-aga n'ihu itinye ya n'ime ngwa anyị iji buo ya.
Ozugbo emere nke a, na ihuenyo izizi anyị ga - ahọrọ ịwụnye Xubuntu ma hapụ ya ka ọ bulie ihe niile dị mkpa maka sistemụ ahụ.
Ozugbo etinyere usoro ahụ na kọmpụta ahụ, Ọkachamara ntinye nke Xubuntu ga-apụta, na ihuenyo izizi nke a ọ ga-ajụ anyị ka anyị họrọ asụsụ ọ ga-arụnye sistemu ọhụrụ Xubuntu 18.04 LTS.
Na ihe atụ a, m na-ahọrọ Spanish wee pịa n'ihu.
Emela nke a ugbu a amaara m Ọ ga-ajụ anyị ka anyị wụnye ngwanrọ nke atọ yana ịwụnye mmelite Xubuntu mgbe usoro nrụnye na-aga n'ihu.
Ka anyị wee họrọ nke a, ọ dị mkpa ijikọ na Internetntanetị, ozigbo anyị họpụtara ihe achọrọ anyị pịa ọzọ.
Na nhọrọ ndị a, Ọ ga-egosi anyị ụdị nwụnye na nkewa nke diski.
Ebe odi anyi ma obu anyi ehichapu diski dum ma tinye Xubuntu na ya (kpachara anya na nhọrọ a, o nwere ike ibute mkpocha data)
Ma ọ bụ na nhọrọ ndị ọzọ, anyị ga-enwe ike ekenye diski iji wụnye Xubuntu ma ọ bụ na anyị nwekwara ike ịmepụta ma ọ bụ kenye nkewa ezubere maka sistemụ nke anyị ga-enye ya usoro kwesịrị ekwesị, dị ka nke a.
Ya mara mgbanwe anyị na-eme, anyị na-anabata anyị ga-enweta ihu ọkwa nke mgbanwe ndị a ga-eme na diski ahụ ma ọ bụrụ na afọ juru anyị ma kwenye ịnabata.
Ma ọ bụghị ya, ana m akwado ka ị nyochaa akụkụ gị ma chọpụta ndị ebe ị nwere ozi dị mkpa ma zere ịmetụ ha aka.
Site na nke a, ntinye nke sistemụ ga-amalite, na nhọrọ ọzọ ọ ga-ajụ anyị ka anyị họrọ mpaghara oge anyị hazie ya na sistemụ.
Iji rụchaa anyị ga-emepụta akaụntụ onye ọrụ na paswọọdụ, Paswọọdụ a dị mkpa ka anyị cheta ya ebe ọ ga-abụ nke anyị ga-abanye wee rụọ ọrụ na sistemụ ahụ.
Ná ngwụsị nke nwụnye anyị ga-amalitegharị kọmputa ma wepu mgbasa ozi na ntinye.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Xubuntu 18.04 LTS Ntuziaka Ntuziaka
Ehihie ọma. Enwere m ubuntu 17 ma ọ gaghị ekwe ka m kwalite na 18, ana m atụ ụjọ na ọ bụ n'ihi enweghị akụrụngwa igwe. Naanị m na-enye ya mmelite, mgbe nhọrọ iji melite ubuntu pụta, ọ naghị azaghachi ma ọlị. Gụ ihe na ụgbụ, ọ dị ka xubuntu na-akwado igwe ndị ọzọ pere mpe, ma eleghị anya nke ahụ bụ azịza. Agbanyeghị, aghọtaghị m etu a ga-esi etinye xubuntu, kama ịbakwasị ubuntu ..
Zaghachi Raul Plazas G
Ndewo, m ga-achọ ịma ma m nwere ike iweghachite aha njirimara na paswọọdụ nke PC ochie m (2006), nke echekwara na-ejighi ya ma achọrọ m ịgbake faịlụ ndị m chebere, ogologo oge echefuru aha njirimara na paswọọdụ, enweghị m ike imeghe PC.
Enwere usoro ọ bụla iji dozie nke a?
You nwere ike bulie draịvụ ike na PC ọzọ ma were kọpụta ihe niile na draịva gị (ma ọ bụrụ na ezighi ya ezo)
Ọ na-arụ ọrụ mgbe niile. Onwere ihe m amaghi, ma ulo oru na aru oru na onwu onwu anyi na asi na oburu na otu ihe aru na adiri nma.